Sheekada filimka Shailaja Reddy Alludu: Naga Chaitanya iyo Ramya Krishna xifaaltanka dhex maray – Filimside.net
Sheekada filimka Shailaja Reddy Alludu: Naga Chaitanya iyo Ramya Krishna xifaaltanka dhex maray
September 15, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: September 15, 2018
Shailaja Reddy Alludu waa filim Telugu ah kaasi oo nolosha arimaha qoyska ka hadlaayo sidoo kalena mashruucaan waa siweyn loo wada sugaayay hadal heyntiisana aad u sareesay.
Jilaayaasha filimkan: Naga Chaitanya, Ramya Krishna, Anu Emmanuel iyo Murali Sharma
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac 28-daqiiqo
Qiimeynta sheekada filimkan: 3/5 (Sedex xidig).
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkan: Bandhiga jilaayaasha, muusigada, sheekada arimaha qoyska iyo shactirada jilaayaasha sameenayaan.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Sheeko qadiimi ah ayuu xambaarsan yahay iyo qaabka sheekada loo dhigay qaybaha dambe oo xoogaa lagu yara caajisayo.
Fariinta Filimka Shailaja Reddy Alludu: Sheeko nagu cusub ma xambaarsano filimkan wuxuuna ka hadlaa wiil faqiir ah oo jeclaanayo gabbar taajir ah iyo caqabada ugu weyn oo ay la kulmayaan oo ah hooyada gabadha dhashay inay jaceylka iyo guurka ay damacsan yihiin labada is doorteen diidan tahay.
Chaitanya wuxuu jeclaanayaa gabadha isla weyn Anu oo dadka dhan yasto balse ugu dambeyntii Anu jaceylka Chaitanya wey aqbaleysaa waxaana dhex maraayo is fahan wacan.
Laakiin Chaitanya iyo Anu jaceylkooda waxaa meesha ka saareyso hooyada isla weyn oo dadka dhan waxba agteeda ka ahayn Shailaja Reddy (Ramya Krishnan) sidoo kalena aan marnaba aqbaleyn gabadheeda Anu inay guursato Chaitanya.
Haddaba qaybaha dambe filimkan waxaa loo daawan doonaa Chaitanya dhibka uu jaceylkiisa u maraayo iyo sida hooyada sodohdiisa noqon laheyn Shailaja Reddy (Ramya Krishnan) kaga dhaadhacsiin lahaa guurka gabadheeda Anu inay aqbasho.
Maxaa Laga Yiri Bandhiga Jilaayaasha: Naga Chaitanya si wacan ayu doorkiisa dagan kaga baxsaday sidoo kalena wuxuu muujiyay marwalbo filimada fariimaha arimaha qoyska xambaarsan inuu ku wacan yahay.
Ramya Krishna waa qasab inay shaashada awood badan ku lahaato marwalbo doorkeedii maamada ee Baahubali ku sameesay awgeed filim walbo haweeneey karti badan ayay ku matashaa markaana si wacan ayay filimkan kaga baxsatay dhanka ad adeega iyo go’aan qaadashadeeda madaxa banaan.
Anu Emmanuel iyadana door dhex dhexaad ah ayay filimkan ku leedahay balse uma saameyn badno sida Naga Chaitanya iyo Ramya Krishna inkastoo ay ku jrto dadka mashruucan madaxeeda loo daawanayo.
Gunaanad: Director Maruti wuxuu doortay fariin marar badan horey loo sameeyay laakiin hogaamiyaasha filimkan oo siweyn kaga baxsadeen iyo sheekadiisa oo iska yara wacan awgeed waxay ka dhigi doontaa in qoysaska soo dhaweyn doonaan mashruucaan.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Shailaja Reddy Alludu:
Waxaa Aqrisay 803